DandyLoop: Goverana Vatengi Vepamhepo Pakati Pezvitoro | Martech Zone
Mugovera, December 6, 2014 Muvhuro, Kukadzi 8, 2016 Douglas Karr
Muitiro wakajairika paminda yakawanda yepamhepo kubatana pakati pemakambani akasiyana anoshanda mundima iyoyo, hombe kana diki. Izvi zvakajairika mune nharembozha, mumitambo yepamhepo, mune zvemukati zvemavhidhiyo, uyezve mumasosi ezvinyorwa Mune zvinyorwa zvemukati tinoona kurudziro yekudyidzana yezviri mukati memasaiti, kunyangwe paanokwikwidza. Zvakaoma kuwana vatungamiriri vasingatsigire maitiro aya. Kunyange zvakadaro, zvinoda huwandu hwakakura hwekukura kubva kumakambani ari mumunda - ivo vanofanirwa kunzwisisa kuti kugovana haisi nzira-imwe yekupa, asi nzira mbiri - munhu wese anokunda.
Kunyangwe kuve nesu kubvira kutanga kweinternet, chete mumakore achangopfuura indasitiri yeCommerce yakatanga kuzvisarudzira. Kuwanda kwezvishandiso zveSawaS kwakaita kuti zvitoro zvepamhepo zviwedzere kuvhurwa, uye nhasi kune anopfuura gumi nemaviri acho. Chinhu chimwe chete chakange chisipo apa chiitiro chekushandira pamwe: zvitoro zvichiri zvakasungwa kune echinyakare anodhura marongero ekushambadzira, uye ivo vanotsvaga nzira nyowani dzekusvikira kune vangangove vatengi - zvemagariro zvaive chimwe, uyezve zvemukati. Zvino ivo vanoona kukosha kwekushandira pamwe, asi ivo havana nzira yekuzviita.
Maitiro akanakisa ekubatana pakati pezvitoro zvepamhepo zviri mubhizinesi ravo repakati - kutengesa zvigadzirwa. Kamwe kana zvitoro zviviri zvakabatana zvikasarudza kushandira pamwe nekukurudzira pane zvigadzirwa zvemumwe nemumwe, tinoona CTR iri pamusoro kupfuura chero chinhu chipi zvacho chatinoziva mukushambadzira kwechinyakare (zvinopfuura 7% paavhareji). Izvi imhaka yekuti kusiyana nekuwanda kwekushambadzira kwechinyakare - apa kukosha kune uyo ano shopper ndeyechokwadi - izvi ndizvo zvaanotarisa kana iye achitenga.
DandyLoop inogonesa tsika yekushandira pamwe vachishandisa yemubatanidzwa chikuva pazvitoro zvepamhepo, uko chimwe nechimwe chitoro chinogona kuwana nekukoka zvimwe zvitoro kuti zvibatsirane, zvichireva kuti vachakurudzirana pane zvigadzirwa zvemumwe neumwe. Izvi zvinoenda neimwe nzira zvakare - chimwe nechimwe chitoro chinogona kuwanikwa uye kukokwa kuzobatana nevamwe. Ivo vanokwanisa kubata yavo network network uye nekutarisa mashandiro emumwe nemumwe wavo.
Iko kushandira pamwe kwakavakirwa pakuenzana, uye ndipo panotungamira kutonga kwedu - kune mushanyi wese anopihwa nechitoro kune mumwe wevaanoshanda navo, ichawana mushanyi mutsva. 1 ye1. Izvi zvakasarudzika muCommerce yenyika: vatengi vedu havasi mubhizinesi rekutengesa traffic yemari, ivo vari mubhizinesi rekutengesa zvigadzirwa - uye ndizvo zvatiri kupa - yakawanda traffic, vashanyi vazhinji, uye zvimwe zvekutengesa.
Parizvino beta ye Shopify vashandisi, DandyLoop inopa kutonga kuzere pamusoro pezvigadzirwa zvako zvinokurudzirwa, mishumo yakajeka uye nekukurumidza uye nyore setup!
Tags: dandyloopecommerce kusimudzirashopifymushanyi kugovana